वाईवाई चाउचाउलाइ करेन्टको चुनौती, कसरी एकाएक अगाडि आयो करेन्ट ? – Palika Times
वाईवाई चाउचाउलाइ करेन्टको चुनौती, कसरी एकाएक अगाडि आयो करेन्ट ?
२१ असार, काठमाडौं। २०७४ माघ १५ गते बिहारको पूर्णियामा चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीले प्रिमियम सेग्मेन्टको चाउचाउको बजार सानो रहेकाले आफ्नो समूहले त्यतातिर ध्यान नदिएको बताएका थिए।
पूर्णियामा वाइवाइको फ्याक्ट्री भएको स्थानमा नेपाली सञ्चारकर्मीलाई भ्रमण गराएपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा कोरियन रामेन चाउचाउले विस्तारै ‘योङ जेनेरेसन’ को रोजाइमा परेकाले त्यसतर्फ जाने समूहको सोच छैन भन्ने प्रश्नमा चौधरीले वाइवाइका ग्लोबल सीइओ जीपी साहलाई देखाउँदै भनेका थिए-‘हो, मैले पनि सुनेको छु, त्यसले केही बजार लिएको छ। तर त्यो एकदमै सानो बजार हो। नेपाली उपभोक्ताले महँगो चाउचाउ किन्दैनन्। हामीले केही चाउचाउ महँगो सेग्मेन्टमा ल्याएका थियौं तर सफल हुन सकेनौं।’
चौधरीले प्रिमियम सेग्मेन्टमा दिएको तर्कमा साहले सही थाप्दै केही ब्राण्डहरु उल्लेख गर्दै भनेका थिए- ‘कोरियन रामेन अहिले केही डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट बिक्री भएको छ। यसको भोलुम ठूलो छैन, यसले वाइवाइलाई खासै ठूलो असर गर्दैन।’
तीन वर्षअघि चौधरी र साहले वाइवाइको ब्राण्डमाथि कसैले धावा बोल्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए। तर यही तीन वर्ष चाउचाउ बजारमा ठूलो परिवर्तन आयो।
र, बजारमा एकछत्र राज गरेको वाइवाइका लागि हट एण्ड स्पाइसी सेग्मेन्टमार्फत अरु उद्योगले धावा बोलेका छन्।
करेन्ट चाउचाउको उत्पादक यशोदा फूड र टुपिएम चाउचाउको उत्पादक एसियन थाइ फूडले ल्याएको कोरियन रामेनजस्तै चाउचाउले वाइवाइको स्थापित बजार हल्लाएको छ। यो सेग्मेन्टमा वाइवाइको कोरियन फ्युजन स्पाइसी किम्ची रामेनको बजार हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा कम छ। यो सेग्मेन्टमा धेरै पछाडि परेपछि वाइवाइले अर्को चाउचाउ डाइनामाइट समेत ल्याइसकेको छ।
बिजमाण्डूको रिसर्च टिमले गरेको अध्ययन अनुसार, हट एण्ड स्पाइसी सेग्मेन्टमा चौधरीले मासिक १५ हजार कार्टुन मात्रै चाउचाउ बिक्री गर्छ। तर यही सेग्मेन्टमा यशोदा फूडको करेन्ट मासिक ८० हजार कार्टुन बिक्री हुन्छ।
करेन्टको यो सेग्मेन्टमा ४९.८४ प्रतिशत बजार हिस्सा ‌ओगट्दै पहिलो नम्बरमा छ। यशोदाले करेन्ट अकबरे, करेन्ट हट एण्ड स्पाइसी र करेन्ट हट एण्ड लेमन ब्राण्डमा चाउचाउ बिक्री गर्दै आएको छ।
दोस्रो स्थानमा एसियन थाइ फूड्स छ, जसले टुपिएम ब्राण्डमा मासिक ५० हजार कार्टुन हट एण्ड स्पाइसी चाउचाउ बिक्री गर्छ। एसियनको टुपिएम अकबरे चिकेन र टुपिएम कोरियन रामेन दुई ब्राण्ड छन्।
यसको बजार हिस्सा ३१.१५ प्रतिशत छ। यो सेग्मेन्टमा चौथो स्थानमा पोखरा नुडल्स रहेको छ।
हट एण्ड स्पाइसी सेगमेन्ट
यो उद्योगले मासिक ८ हजार कार्टुन बिक्री गर्छ। पाँचौ स्थानमा चितवनमा रहेको यमयम चाउचाउ उत्पादक स्मार्ट फूडले उत्पादन गर्ने हट एण्ड स्पाइसी चाउचाउको बजार छ। यो उद्योगले मासिक तीन हजार कार्टुन चाउचाउ बिक्री गर्छ।
कसरी एकाएक अगाडि आयो करेन्ट?
कोभिड-१९ को पहिलो लहरपछि कोरियन रामेन आयात हुन सकेन। यो आयात नभएको मौका छोप्दै यशोदा र एसियन थाइ फूडले उत्पादन गरेको हट एण्ड स्पाइसी चाउचाउको आपूर्ति बढाए। कोरियन रामेनकै स्वादमा त्यो पनि सय रुपैयाँ सस्तोमा यो चाउचाउ आएपछि युवापुस्ताको ध्यान खिच्यो।
कोरियन रामेनको एक प्याकेटको डेढ सय रुपैयाँ थियो। तर यी दुई कम्पनीले ५० रुपैयाँ प्याकेटमा यही स्वादको चाउचाउ बिक्री सुरु गरे। १२ देखि ३० वर्ष उमेर समूहलाई यो चाउचाउको स्वादले आकर्षित गर्‍यो। उनीहरुको रोजाइमा करेन्ट र टुपिएम पर्‍यो। सानो बजार भन्दै बसेको वाइवाइका लागि एक वर्षकै अवधिमा थ्रेट बन्यो।
वाइवाइले हट एण्ड स्पाइसी चाउचाउ बजारमा ल्याएको छ। तर पहिले नै उपभोक्तामा लत बसिसकेको करेन्ट र टुपिएमका अगाडि वाइवाइ फिक्का बनेको छ।
अरु सेग्मेन्टमा वाइवाइ अगाडि
हट एण्ड स्पाइसीमा मात खाएको वाइवाइ अरु सेग्मेन्टमा भने धेरै अगाडि छ। २० र २५ रुपैयाँमा बिक्री हुने चाउचाउमा वाइवाइको बजार हिस्सा ४६.५१ प्रतिशत छ। यो सेग्मेन्टमा वाइवाइको मासिक सात लाख कार्टुन चाउचाउ बिक्री हुन्छ।
यो सेग्मेन्टमा दोस्रो एसियन थाइ फूड्स छ, जसले २ लाख ५० हजार कार्टुन बिक्री गर्छ। यसको बजार हिस्सा १६.६१ प्रतिशत छ।
हट एण्ड स्पाइसीमा पहिलो नम्बरमा रहेको करेन्टको बजार हिस्सा १०.६३ प्रतिशत मात्रै छ। यो चाउचाउ मासिक १ लाख ६० हजार कार्टुन मात्रै बिक्री हुन्छ। रेगुलर सेग्मेन्ट अन्तर्गत १५ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने चाउचाउमा भने एसियन थाइ फूड्स पहिलो नम्बरमा छ। एसियनले मासिक २ लाख ७५ हजार कार्टुन चाउचाउ बिक्री गर्छ। बिजमाण्डू मा खबर छापिएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध मुद्दाको बहस आज सकिँदै